Now, We are using Unicode- စာမျက်နှာ2— MYSTERY ZILLION
Now, We are using Unicode
ကိုစေတန် ရဲ့ saturngod.net ရဲ့ comment box မှာ unicode ရိုက်လို့မရဘူး .. ဟုတ်လား ဟင် .. ??? တစ်ယောက်တည်းဖြစ်နေတာလားလို့ .. <br>
အရင်တုန်းက zawgyi နဲ့ ရိုက်ပေမယ့်ရတယ် .. ခုလေးတင်တင်လိုက်တဲ့ comment မှာ
ခါတိုင်းလိုပဲ zawgyi နဲ့ရေးပေမယ့် unicode ပြောင်းမသွားဘူးဖြစ်နေတယ် ..
ရိုက်ထားတဲ့ စာလုံးက မြန်မာစာ စာလုံးပေါင်းတွေ မှားနေတယ်။ ဗြဲ ရဲ့ ရှေ့မှာ --ျ ပါနေတာ ကြောင့် zawgyi လား unicode လား ခွဲ မရတော့ဘူး ဖြစ်သွားလို့ မပြောင်းတာပါ။<br>
Vanilla ကိုပြောင်းလိုက်တော့ ကြည့်ရတာ နည်းနည်းတော့ အရင်လိုအဆင်မပြေဘူးဗျ။ 'ယွန်းချိုဖောင့်ကိုတော့ ကိုစေတန် ဘလော့ဂ် မှာကတည်းကြိုက်နေတာ။ အခုတော့ သုံးလို့ ရပြီပေါ့
Vanilla ကို သုံးကြည့်ပါ။ အရင်က Vbulletin ထက် ပိုပြီး ကောင်းပါတယ်။ အခုဆိုရင် မသိတာကို လွယ်လွယ်မေးလို့ ရတယ်။ အရင်တုန်းက ဘယ်ကနေ သွားမေးရမှန်း မသိ ဖြစ်နေတယ်။ နောက်ပြီး Category တွေကို လွယ်လင့်တကူ ကြည့်လို့ရတယ်။ အဖြေတွေကို vote အလိုက်သော် လည်းကောင်း date အလိုက်သော် လည်းကောင်း ကြည့်လို့ရတယ်။ ၂ ရက်လုံး သုံးကြည့်လိုက်ပါ။ သုံးတတ်သွားမှာပါ။ vbulletin ထက်စာရင် အများကြီးကို လွယ်ပါတယ်။<br>
@Saturngod <br><br>No matter how many times I login , Posts are still show as new even it is very old .<br>Does it also happen in other ??? <br>
<br><br>ya .. it happens to everyone .. i think ... <br><br>they are old posts in Vbulletin .. but now in Vanilla they'll still show as new posts unless u see it .. <br>
@Saturngod <br>No matter how many times I login , Posts are still show as new even it is very old .<br>Does it also happen in other ??? <br>
ဘာကို ပြောတာလဲ မသိဘူး ? ဘယ် post တွေက ပြနေသေးတာလဲ။ အသစ် ဘယ် ၂ ခု ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာလား။ အဲဒါတွေကို မဖြစ်ချင်တော့ရင် ထိပ်မှာ <b>အကုန်ဖတ်ပြီး</b> ဆိုတာကို click လုပ်လိုက်ရင် ရမယ်။<br>
@ Morris, you can check the latest post at the bottom of Post ( except Vote Down reply ) or if more than one page, you can go 12by p1, p2.<br>
now, i use key magic and made some post in MZ. But i can't able to check whether my writing is in zawgyi or unicode. That why, let me advise MZ have definite instruction ..for which special one to install, and which can't use... definite, definite.. definite and give us clear instructions. Cos we have many fonts in our computers.... and got confused not only in our mind but in computers.<br><br>Thanks<br>beginner32<br>
I'm using Keymagic in mac also. But latest keymagic can know, what is your current keyboard. Please , read detail in <a href="http://www.myanmaritpro.com/profiles/blogs/keymagic-14-released">here</a>.<br>;
တစ်ခုပဲတောင်းဆိုပါရစေ။<br>မြန်မာစာ typing ကို ယူနီကုတ်နဲ့လေ့ကျင့်ချင်လို့ပါ<br>ဆော့ ၀ဲလေး (software) ထွင်ပေးပါလား။<br>typing ကျင့်ချင်လို့ပါ။<br>အဲဒါမှ win innwa တို့ zawgyi တို့နဲ့ ရိုက်နေကြလက်တွေကို ယူနီကုတ်လက်အဖြစ် တစ်ခါတည်းပြောင်းပစ်ချင်လို့ပါ။<br>အခုကျတော့လေ စာလုံးတွေ ကို UnicodeKeyboard_layoutfcopy.JPG ဖွင့်ပြီး ကြည့်လိုက်ရိုက်လိုက် ဖြစ်နေတာပါ။<br>စက်ထဲမှာက ဇော်ဂျီကော . မြန်မာ၃ ရော ထည့်ထားတော့ လက်ကွက်က မှားလို့မှားမှန်းမသိလို့လေ။<br>အခုတော့ ms word မှာလေ့ကျင့်နေရတာပါ။<br><br>myanmar unicode typing software လေးလိုချင်လိုက်တာ။<br>အဲဒါမျိုးနဲ့သာ လေ့ကျင့်ရရင် အရမ်းကောင်းမှာပဲ။<br>ဒီကသင်တန်းသားတွေကိုပါ သင်ပေးလိုက်မှာ။<br><br>ကျေးဇူးတင်ပါသည်။<br><br>
http://blog.mysteryzillion.org/basic/unicode-guide/ မှာ ပေးထားတဲ့ စာအုပ်ထဲမှာ Unicode အတွက် ဇော်ဂျီ လက်ကွက်အတိုင်း ရိုက်လို့ ရတဲ့ NHM write နဲ့ keymagic ပါပါတယ်။ အဲဒါကို အသုံးပြုပြီး ရိုက်နိုင်ပါတယ် လက်ကွက် အသစ်ပြန်ကြည့်နေဖို့ မလိုပါဘူး။ <br>
Could you help me please? I am using the Safari Browser (version 5.31.22.7), I can't see Unicode fonts from your site.<div>I have already installed WinUniInnWa fonts and Keyboard from T.K. Earlier I have used Zawgyi Safari CSS file to see Zawgyi fonts in my Safari Browser. Now I would like to use WinUniInnWa Unicode in Safari Browser. Any Ways? Please..............</div>
which os are you using ? WinuniInnwa can't support on Mac. If you are using mac, please use Masterpiece Uni Sans. it already include in Unicode Guide package from blog.mysteryzillion.org. We are using Yunghkio for windows and linux. Masterpiece for Mac and iOS.<br>
ok သွားပြီ ကိုစေတန်﻿﻿﻿﻿ရေ ၊ဒါ﻿ပေမယ်. facebook မှာတော.မမြင်ရဘူးဖြစ်နေတယ်။
I'm using unicode force and zawgyi force for facebook and other website that not declare myanmar font in CSS. You can get bookmarklet from http://bookmarklet.saturngod.net<br>;
ရပြီကိုစေတန် ၊ ကြည်.လို.ရတာကိုပြောတာနော်။ ရိုက်လို.မရသေးဘူးဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဟင်။<div>ကျွန်တော်ကနည်းနည်းပိန်းတယ်ကိုစေတန်ရေ။</div>
Please , read <meta charset="utf-8"><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Masterpiece Uni Sans', Yunghkio, Myanmar3, WinuniInnwa; line-height: 20px; "><a href="http://blog.mysteryzillion.org/basic/unicode-guide/"; target="_blank" rel="nofollow" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-size: 13px; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration: none; color: rgb(32, 95, 130); ">http://blog.mysteryzillion.org/basic/unicode-guide/</a> it already include about keybaord.</span>
<p>MysteryZillion ကို Chrome နဲ.သုံးရင် မြန်မာလို ကြည်.လို.မရဘူးဖြစ်နေပါတယ်။ Google နဲ. ရှာတဲ. Results မှာတော. Unicode စာပေါ်ပါတယ်။ စာလုံးတွေကို မှန်မှန်ကန်ကန် မြင်ရဖို. ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ သိချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်.မှာ Unicode Fonts တွေ သွင်းထားပါတယ်။ Windows 7, Chrome 10.0.648.205 ဖြစ်ပါတယ်။ Fonts setting မှာ Myanmar3fonts, Encoding ကို Western ကို ပြောင်းထားပါတယ်။ Spell Check ကို Disable လုပ်ထားပါတယ်။
@g00gle , if you are using chrome in windows , please install <a href="http://www.yunghkio.com/unicode/yunghkio1.1.1.ttf">Yunghkio</a>; font.
May 2011 Registered Users, Moderators
vanila ပုံစံအသစ်နဲ့ ဆိုတော့ ဒီဇိုင်းတစ်ခုတော့ ဆန်းသွားတာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ အခု ဒီဇိုင်းထက် အရင်က vBulletin ကိုပိုပြီးကြိုက်တယ်။ Unicode ကိုသုံးထားတာဆိုတော့ ပိုပြီးကောင်းသွားတာပေါ့။<br>ကျွန်တော့်အတွက်တော့ အခုအချိန်က Zawgyi ကိုလည်း လက်လွတ်လို့မရသေးဘူးလေ... ဒီတော့ သုံးရတာ ဇော်ဂျီကိုပြောင်းလိုက်၊ မြန်မာယူနီကုဒ်ကိုပြောင်းလိုက်နဲ့- ခက်တာက အခုအချိန်အထိ မြန်မာသရီး ယူနီကုဒ်က မျက်စိမယဉ်သေးဘူး။ စာလုံးတွေကို မနဲဖမ်းပြီး ဖတ်နေရတယ်။<br>
@brb_1984 , try Yunghkio instead of Myanmar3. I love Yunghkio glyph.
MysteryZillion ကို Chrome နဲ.သုံးရင် မြန်မာလို ကြည်.လို.မရဘူးဖြစ်နေပါတယ်။ Google နဲ. ရှာတဲ. Results မှာတော. Unicode စာပေါ်ပါတယ်။ စာလုံးတွေကို မှန်မှန်ကန်ကန် မြင်ရဖို. ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ သိချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်.မှာ Unicode Fonts တွေ သွင်းထားပါတယ်။ Windows 7, Chrome 10.0.648.205 ဖြစ်ပါတယ်။ Fonts setting မှာ Myanmar3fonts, Encoding ကို Western ကို ပြောင်းထားပါတယ်။ Spell Check ကို Disable လုပ်ထားပါတယ်။
MZ အတိုင်းမြင်ချင်ရင်တော့ ကိုစေတန်ပြောသလို Yunghkio Font ကိုသုံးပါ။ ဒါပေမယ့် Settings မှာတော့ Fonts >> Yunghkio, Encoding >> UTF-8 ပြောင်းပေးဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်။
MZ မှာအရင်က မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အချိန်ကိုဖော်ပြပေးတာ ပါတယ်ဗျ အဲဒါကို အခု ဒီဇိုင်းအသစ်မှာမတွေ့ရတော့ဘူး တစ်ခါတစ်ခါ အချိန်သိ့ချင်လို့ အမ်ဇက်ကိုပြေးလာရင် မရှိတော့ဘူးဖြစ်နေတော့ စိတ်ထဲမယ် ခုလိုခုလုကြီဖြစ်နေရော အဲဒါလေး ပြန်တင်ပေးပါဥိး လို့။<br>
@MrShanma , now , it's base on your local time. You can check posted time with your current local time. Example: some post is posted on 9:00 AM , it will show 10:30 when check from singapore. I think , it's great.
I recommend myanmar3 layout if you are to use Unicode. It it simple and straightforward as handwritten.
Can't find logout when using from itouch
Check at the end of page.
ဒုက္ခပဲ နာမည်ပြောင်းတာ လူမသိဘူးဆိုပါလား မော်ဒရေတာ အသစ်များခန့်ထားတယ် ထင်နေပုံရတယ် ဒီAvatarပုံနဲ့ ဒီစာရေးပုံ အတူမရှိနိုင်ဘူးထင်ပါတယ် ဒါ Original Identity စစ်စစ်တွေပါ စကားတစ်ခါပြော တစ်ခါရိုက်ချင်ပါစေ ဖြစ်နိုင်အောင်ဆိုတာ တူအောင်လုပ်ယူဖို့ အတော်ခက်တယ်။
<br> <span class="Emoticon Emoticon4"><span>:D</span></span>
လူပျိုကြီးလား... မှတ်မိပါလေစ.. Endless Love ကွ... မ၀င်ဖြစ်တာ နှစ်နဲ့ချီတောင်မှ ကြာနေပြီဆိုတော့.. တော်တော်လည်း ပြောင်းလဲသွားတယ်.. နာမည်တွေရော...ပုံစံတွေရော.. ဖောင့်တွေရော...
အခုလောလောဆယ်တော့၀င်မပွားအားသေးဘူး... အရင်ဆုံး မကုန်နိုင် မခန်းနိုင်တဲ့ စာတွေဖတ်လိုက်အုန်းမယ်... မင်ဘာ အသစ်တွေကလည်း များမှများပဲ... MZ ရဲ့ အောင်မြင်မှုဆိုလည်း မမှားဘူးပေါ့ကွာ..။ အရင်ကလို ဖိုက်တင်ပလေးပြီးတော့ပြောရမယ် လူလေးတွေရှိရင်လည်းပြောထားအုန်းနော်... ငါကတော့ မ ပြောင်းလည်းပဲ ပေါမြဲပေါဆဲ... နောက်မှတွေ့တာပေါ့ကွာ . . .
need advice! using keymagic,
I typed unicode myanmar3 font but while typing font change to eng font .
i try to rechange myan3 font but it's not.
now i write this with myan3 but it automatically change eng. so i exit keymagic.exe
and re open it again but it's not .
i tab more time shortcut key but help me
keyboard layout ရှိရင်လဲပေးpar
twar pyan pi eng font
are you using Windows ? Can you try အကၡရာ or NHM writer. Which version of keymagic are you using ?
ကျနော် NHM writer နဲ. unicode ရိုက်တာ forum တို. notepad တို.မှာ ဆိုရင် Alt+1 နဲ.ပြောင်းပြီး ရိုက်တာ ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကွန်ပျူတာ(XP, windows764 bit)ထဲက folder တွေ file တွေကို နာမည်ပြောင်းတာတော့ မရပါဘူး။
Try F9 button bro. If you want to rename-folder, change your window-font first.
1. Go to >> Control Panel\_All Control Panel Items\_Personalization
2. Choose Window Color.
3. Choose Advanced appearance settings...
4. Choose *Unicode Fonts in all Windows-font.
ကျွန်တော်လည်း ယူနီကုတ် သုံးရတာ သိပ်ကြိုက်သွားပြီဗျ။ အရင်တုန်းကတော့ ဇော်ဂျီကို သုံးနေကြဆိုတော့ ယူနီကုတ်က နည်းနည်း အခက်အခက်ရှိခဲ့တယ်။ အခုတော့ ယူနီကုတ်မှ ယူနီကုတ်ပဲဗျာ။ ဒါနဲ့ ယူနီကုတ်ရဲ့ အားသာချက်၊ အားနည်းချက် တွေကို သိချင်ပါတယ်။ ဇော်ဂျီနဲ့ ယူနီကုတ်ရဲ့ ကွာခြားပုံတွေလည်း သိချင်ပါတယ်။
Go there and read
Vanilla အတွက် FAQ ရေးရတော့မယ်ထင်တယ်။ တစ်ချို့ဆို ကယ်ကြပါဦးတို့ Help Me တို့ကို ခေါင်းစဥ်တွေထားတော့ ဘာမှန်းမသိပဲ ၀င်ကြည့်ရတာ လိုင်းမကောင်းတော့ အချိန်ကကုန်သွားတယ်။
တစ်ချို့ကျတော့ Wireless မြန်အောင်လုပ်နည်းလို့ရေးထားတယ် ၀င်ကြည့်တော့ လုပ်နည်းရေးထားတာမဟုတ်ပဲ သူမသိလို့မေးထားတာဖြစ်နေတယ်။ ကျွန်တော်လည်း တတ်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူး၊ ဖြစ်နိုင်ရင် မေးခွန်းခေါင်းစဥ်တွေကို အဓိပ်ပါယ် ရှိစေချင်တယ်။ အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
@nlt , I already make FAQ when asking
but somebody didn't read
gtalk မှာ ယူနီကုဒ်ကို ဘယ်လိုသွင်းရမလည်း တစ်ချက်လောက် ကူညီပါဦးဗျာ ...
font ပြောင်းပြီးရိုက်ရုံပါပဲ။ ထူးထူးခြားခြားမရှိပါဘူး။ ပေါ်တာတော့မလှဘူးပေါ့ဗျာ။
space တွေ၀င်နေတယ်။ အောက်ကလင့်ကအတိုင်းလုပ်ရင်တော့ ပုံမှန်အတိုင်းပေါ်ပါလိမ့်မယ်
i can't read fonts in gmail or facebook, not all fonts, just title. i already install many fonts including Unicode. Why i can't read? And also here, i can read pages but i can't read the fonts display in tab. Please, Thanksalot..
@KSA , what os are you using ?